Ngwunye brazing diamond ngwaọrụ na RF na-ebugharị ọkụ
Home / ngwa / Brazing imebi / Brazing Diamond Ngwaọrụ Na Ntinye
Category: Brazing imebi Tags: diamond brazing, brazing diamond ngwaọrụ, brazing diamond ngwaọrụ abanye, diamond ngwaọrụ brazing, dayamọnd brazing dị elu, diamond na-abanye ọkụ
Ngwaọrụ Brazing Diamond na Ngwongwo Brazing Equipment
Itinye Brazing bụ ihe kasị pụrụ ịdabere na usoro nke isonyere diamond ka ọla. Ọ bụkwa ihe a na-ejikarị eme ihe na otu n'ime ebe a na-eme usoro dịka nzuzo nzuzo na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Akwụkwọ a na-anwa ịnye nkọwa zuru ezu nke diamonds brazing, na nchịkọta nke ngwa ndị mepụtara n'oge na-adịbeghị anya eji brazing nke ihe ndị ahụ.
Brazing ntinye bụ usoro nke ijikọ ọnụ ụzọ abụọ site na iji nke atọ, ọla awụchara agbaze - braze alloy. A na-eme ka ebe nkwonkwo ahụ dị ọkụ karịa ebe mgbaze nke alloy braze ma n'okpuru ebe agbaze nke ihe ndị ahụ na-esonye; Ngwongwo ọla a wụrụ awụ na-asọba n'etiti ọdịiche dị n'etiti ihe abụọ ndị ọzọ site na ọrụ okpu ma mepụta njikọ siri ike ka ọ na-ajụ oyi. Dịka mgbe ị na-esonye ọla, a na-ekepụta agwakọta mgbasa n'etiti ọla abụọ ahụ iji sonye na alloy braze.
N'ime usoro niile maka ígwè njikọ,ume nkwado nwere ike ịbụ nke kachasị dị ọtụtụ. Brazed nkwonkwo nwere nnukwu ike ọdụdọ - ha na-esikarị ike karịa ọla abụọ ahụ ejikọtara ọnụ. Ngwunye nkwonkwo ụkwụ na-achụpụ gas na mmiri mmiri, na-eguzogide mkpọtụ na ujo ma enweghị mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ na-emetụta ya. Ebe ọ bụ na ọla ndị a ga-ejikọtaghị agbaze n'onwe ha, ha anaghị agbagọ ma ọ bụ na-agbagọ ma na-ejigide njirimara mbụ ha.
Usoro a dị mma maka isonyere ọla ndị dị iche, nke na-enye ndị mmebe nzukọ nhọrọ ndị ọzọ. Enwere ike ịmepụta mgbakọ dị iche iche na nkebi site na iji ọla ọla na-eji nwayọọ nwayọọ agbaze ihe. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịhọrọ ngwongwo ọla iji kwụọ ụgwọ nke ọdịiche gbasaa nke ọkụ n'etiti ihe abụọ. Brazing dị ngwa ngwa ma nwee akụ na ụba, na-achọ obere okpomọkụ ma ọ nwere ike ịdị na-agbanwe agbanwe maka ngwa ọrụ na -emepụta ngwa ngwa.
Brazing imebi nke diamond na ihe eji edozi dị iche na brazing iji sonye ọla. Kama ịdabere na arụ ọrụ na mgbakwunye mgbasa, nkwado nke diamonds na-adabere na mmeghachi omume kemịkal.